April 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 18-09-1442.
guuleed	 Apr 30, 2021 0
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkaan Ka Dhageyso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka…
Dhagayso: Barnaamijka Al-Xayaatu Macal Qur’aan (17)
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa Ramadaankan sanadka 1442-da hijriyada waxay qabaneysaa barnaamij ka hadlaya arimaha Qur’aanka kariimka. Barnaamijka waxaa ka qeybgalaya culimo, masuuliyiin, waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee…
Dhageyso Barnaamijka Tarbiyada Caruurta 18-09-1442
Dhageystayaasha iyo akhrisstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maantana waa Jimco, Taariikhda hijriguna Waxay ku…
Diirada oo looga hadlay fadliga Tobanka Danbe ee Ramaan.
\_Maanta waa Jimco 18-ka ramadaan kusoo dhawaada Barnaamijka Diirada Jimcaha oo maanta lagu soo qaatay fadliga tobanka Danbe ee Ramadaan waxaana marti ku ahaa Sheekh Nuur Macalim Cabdiraxmaan. Halkan ka dhagayso Dirada Jimcaha 30 04 2021.
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. maanta waa Jimco waana 18-ka ramadaan 1442 Hijriyada kusoo dhawaada Warka subaxnimo Waxaana soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir.…
guuleed	 Apr 29, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 18-09-1442 …
Dhagayso: Barnaamijka Al-Xayaatu Macal Qur’aan (16)
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. maanta waa Khamiis waana 17-ka ramadaan 1442 Hijriyada kusoo dhawaada Warka subaxnimo Waxaana soo jeedinaya Maxamed Daahir. Halkan…
guuleed	 Apr 28, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 17-09-1442 …
Dhagayso: Barnaamijka Al-Xayaatu Macal Qur’aan (15)